जनयुद्धको विचार नै प्वाल पार्नेलाई पोलको प्वालको चिन्ता - Jhilko
जनयुद्धको विचार नै प्वाल पार्नेलाई पोलको प्वालको चिन्ता
काठमाडौं । दश वर्षे जनयुद्ध र त्यसले लिएको विचार र मुद्धालाई चटक्कै छोडेर यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीको संयोजक बनेर देश बनाउने भन्दै मेची महाकाली यात्रामा दौडिएका छन् । उनको यात्रालाई साथ दिएका छन् जनयुद्धकै क्रममा जेल नेल भोगेका सिन्धुलीका अर्का युवा नेता गंगानारायण श्रेष्ठले ।
यात्राका क्रममा यतिबेला गंगा नारायण, बाबुराम पत्नी हिसिला र बाबुराम भट्टराई अछामको मंगलसेन बजार पुगेका छन् । दौरा सुरुवालमा ठाँट्टिएर अघि लागेका बाबुरामको पछि लागेका गंगा नारायणलाई भने यतिबेला बिजुलीका पोलमा परेका प्वालको मायाँ लागेर आएको छ ।
जनयुद्धका क्रममा घाइते भएका हजारौँ जनता, बेपत्ता योद्धा र शहीद परिवारको कुनै चिन्ता नलिई उनीहरुका सपना साकार पार्नुपर्ने र घाइतेको जलिरहेको घाउमा मल्हम पट्टी लगाउन छोडेर बाबुरामको बहकाउमा कम्युनिष्ट र वामपन्थीको साइनो नै नामेट पारेका गंगानारायणलाई भने युद्धका क्रममा गोलीले प्वाल पारेको बिजुलीको पोलको मोह बढेको छ ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन्, ‘२०५८ मा भएको भयानक भिडन्तमा घाइते पोल । जो आजसम्म युद्धको डोब बोकेर इतिहास बाँचिरहेको छ । त्यही बेला ध्वस्त दरबार अहिलेसम्म पुननिर्माण भइसकेको छैन । शीघ्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जावस् ।’
युद्धका क्रममा घाइते भएका योद्धाहरु अझै शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर उपचारको अभावमा भौतारिरहेका छन् । बेपत्ताका परिवारहरु अझै कि शास चाहियो कि लाश चाहियो भन्दै धर्ना र आन्दोलन गरिरहेका छन् । युद्धमा लागेका नेताहरुलाई व्यक्ति व्यक्ति छानेर बिभिन्न डलरवादीहरु मुद्धा लगाउँदै छन् । वलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जग र प्रभावबाट डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री भए । उनकी पत्नी हिसिलाले पनि भौतिक र अन्य मन्त्रालय सम्हालिन । स्वयम् गंगा श्रेष्ठले पनि लाभको पद पाएकै हुन् ।
तर, जनयुद्धका पीडितहरुको चासो गंगानारायण र उनको नेतृत्वलाई छैन । दुला परेका पोलहरु फेर्नुपर्ने र ध्वस्त भएका दरवार पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उनको चासोले उनी र उनको नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो बन्नेमा व्यस्त ररहेको देखिन्छ । जनयुद्धकालको भौतिक र मानवीय क्षतिको नैतिक दायित्व डा. बाबुराम भट्टराई र उनको टिमले लिनुपर्दैन ?
अमेरिकी समर्थक प्रतिपक्षीले ट्रक जलाएर भेनेजुएली राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाए
हाँसोबारे बाबुरामको बयान ः थोरै हाँस्ने बाउ, धेरै हाँस्ने...
छोरी मानुषी यमीको एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हाँसिरहेको तस्विरसहितको पुस्तक वार्ताको...
यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम्भूका अधिकृत शिवलाल घुससहित...
गाडीको कर र प्रदूषणबापतको रकम तिर्न पौडेलले सेवाग्राही दीपक खतिवडासँग घुस लिएको...
माथिल्लो त्रिशूली 'थ्री ए' राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो
आयोजनाको विद्युत् सिम्लेमा रहेको विद्युत्गृहबाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत्...
काठमाडौंमा आगलागी हुँदा धनमाल जल्यो
काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ शोभा भगवतीस्थित विमला शाहीको घरमा आज आगलागी हुँदा करीब...